China Yakagadziriswa Dhizaini Inotonhora Towers ine Rectangular Chitarisiko Mugadziri uye Mutengesi | Yubing
Mvura inodziya kubva kunopisa inoputirwa kuhurongwa hwekuparadzira mvura pamusoro peshongwe kuburikidza nemapombi. Iyi mvura yakakamurwa uye inogoverwa pamusoro penzvimbo nyoro yekuzadza neakadzvanyirira emvura yekuparadzira mombe. Panguva imwecheteyo, mweya unodhonzwa mukati kuburikidza nemhepo inlet louvers pazasi peiyo shongwe uye inofamba ichikwira kumusoro kuburikidza neiyo nyoro deck yekuzadza iyo yakatarisana nekuyerera kwemvura. Chikamu chidiki chemvura chinopwa chinobvisa kupisa kubva pamvura yasara. Mhepo inodziya ine hunyoro inodhonzwa pamusoro peshongwe inotonhorera neiyo fan uye inoendeswa kune mhepo. Mvura yakatonhorera inoyerera kubheseni riri pazasi peshongwe uye inodzoserwa kunzvimbo inopisa. Iyi dhizaini (yakatwasuka mweya kuburitsa) uchifunga unopisa-mweya unokwira kumusoro uye pane imwe nhanho pakati pemhepo nyowani inopinda uye inodziya mwando mweya nzvimbo dzekutapudza mukana wekudzokororwa kwemhepo.
Zvakanakira Open Dunhu Kutonhora Shongwe:
Yakaderedzwa Simba Rekushandisa (Ndiyo shongwe inotonhorera zvakanyanya muindasitiri)
Yakadzika Yezvakatipoteredza Impact (Yakaderera kushanda ruzha uye premium inoshanda mafeni)
Yakasimba uye Chiedza-huremu hweNyore Kuisirwa uye Kugadziriswa.
Yakakwira Resistance Structure yekusangana nemhepo uye kudengenyeka kwenyika zvinodiwa.
Flexible Sarudzo pazvinhu zvakakosha zvemapurojekiti akagadzirwa.
Maumbirwo uye Mapanera
ICE yakajairwa kutonhorera shongwe inoshandisa yazvino yakanyanya ngura-inomiririra yakavharwa simbi jira iyo ine zinc seyakanyanya substrate, yakabatana neAl, Mg uye trace huwandu hwesilicon.
Iyo simbi (yakafanana zvinhu seyakavharirwa) bheseni rakazara neinotsvedza dhizaini yekudzivirira kudzika kwemvura. Uye inoumbwa neyekubuda kwemvura yekubatanidza neanti-vortex firita, kubuda ropa uye kufashukira kubatana, kugadzira-kwakabatana kwemvura kwakazara nevharuvhu yekuyangarara, yakasimbiswa PVC yemhepo inlet grilles uye neropa rakabuda pombi.
Wet Deck Zadza / Kupisa Kwekunze
ICE rectangular yakavhurika kutonhora shongwe ine yakagadzirirwa iyo yega herringbone inoputika yekuzadza kurongedza yakagadzirwa nePVC mafirita akasunganidzwa pamwechete uye akaumbwa zvakafanira kuti agadzirise kusagadzikana kwemvura kuti awedzere kushanda kweiyo kupisa kuchinjana.
Chikamu cheV fan
ICE yakavhurika wedunhu kutonhora shongwe akaisirwa neyechizvino chizvarwa axial mafeni, ane akaenzana impeller uye anogadziriswa mashizha ane yakanyanya kushanda profil. Low ruzha mafeni anowanikwa pane anodiwa.
Pashure: Round Bhodhoro Type Counter-kuyerera Kutonhora Towers
Zvadaro: Kuyambuka-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera
Rectangular Vhura mhando kutonhora shongwe